६४ औ राष्टिय सहकारी दिवस मनाइयो
Post Date 2021-04-02 21:57:39
भक्तपुर । भक्तपुर जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि ले ६४ औ राष्टिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा“ मर्यादित व्यवसाय र प्रबिधि सहकारीको “ वर्तमान ऐन कानून र त्यसको सान्दर्भिकता “विषयमा अन्तरक्रीय कार्यक्रम राखी सहकारी दिवस मनायो ।
उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला वचत संघ तथा ऋण सहकारी सस्था लि को अध्क्षय कृष्णगोविन्द लाखाजुको सभापतित्वमा विशेष अतिथि नेफस्कूनका पूर्व अध्यक्ष कैलाश भक्त प्रधाणाङ्गज्यूले पानसमा दिप प्रज्जलित गरेर कार्यक्रम सुरू भयो ।
कार्यक्रममा विशेष अतिथिले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएकोमा संविधानको,नियमको कुरा पनि आयो । हाम्रो कुरो माथिकाले हामीले भन्नासाथ लिन्दैन ,त्यही कुरो कुनै विदेसी एक जनाले भनुभयो भने माथिलो तहका व्यक्तिले लिइहाल्छ । कस्तो त्यो सस्कार ? उहाँको जिज्ञासा पनि रहयो कार्यपत्रमा सहकारीमा कम्प्युटर राख्ने कि कम्प्युटरमा सहकारी राख्ने ! सहकारी ऐन र त्यस्को सान्दर्भिकता हुनु पर्ने विचार राख्नुभयो । वर्तमानको ऐन नियममा मालिक आफै,उपभोक्ता आफै भनेको अलि सच्याउनु पर्ने र त्यसैमा पैसा सवै वैङ्कमा हामीले राख्ने मालिक त ऊनीहरू भयो , हामीमात्र उपभोक्ता भयो । हामी नै मालिक ,हामी नै उपभोक्ता भए आफूखुसी पैसा हामीले चलाउन पाउनु पर्ने हो । त्यो त हामीले चलाउन पाएनौ । चलाउन पाएको भए हामी आफै मालिक र आफै उपभोक्ता हुने थियो भनेर भन्नुभयो ।
सभाका सभापतिले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्रमा सहकारी सस्थाले आफू मर्यादित भएर सहकारी सस्थाले समूदाय– को भई गरि सहकारीले दिएको मूल्य,मान्यता र सिध्दातमा वसेर उपभोक्ताको निम्ति काम गर्नु पर्ने कुरा कार्यपत्रमा प्रस्तुत गर्नु भयो । अझ कार्यपत्रमा संघ,प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई सहकारी रेखदेख गर्ने अधिकार दिएको कुरा वताउनु भयो । सहकारी सस्थाहरू समूदायमा आधारित र समूदायमा आधारित छैन् भनेर हरेक कार्यक्रममा जादा भनिरहनु प–र्याे । सहकारी सस्थाहरू सञ्चालन गर्नेहरूले मर्यादित कार्यहरू गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्नेहरूमा जिल्ला कृषि सहकारी सस्थाका लागेजु ,निवर्तमान अध्यक्ष राध्येश्याम सुवाल,भ.न.पा.का प्रतिनिधि वडा अध्यक्ष हरि प्रसाद वासुकला,भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष कृष्ण वाहादुर धजु,नेफस्कूनका प्रतिनिधिले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । स्वागत मन्तव्य भक्तपुर जिल्ला वचत संघका उपाध्यक्ष हरि बल्लले गर्नुभयो । आसण ग्रहण उध्दघोषक वालकृष्ण धोजुले गर्न लगाउनु भयो । वायज वितरण सस्थाको महिला वहिनीहरूले गर्नुभयो ।
अन्तमा सभापति ज्यूले सवै उपस्गथित सहकारी सस्थाका अध्यक्ष ,उपाध्पक्ष र सहभागीहरूलाई आगामी कार्यक्रममा पनि सहभागिताको आसा गर्दै ,धन्यवाद दिएर सभा विर्सजन गर्नुभयो ।